जोतिषीका अनुसार आजका लागि यी ६ राशीलाई हुदै छ महाँफलिफाप भने बाकीलाई ठिकै, पढ्नुहोस असोज २९ गते बुधबारको राशिफल - Hulaki Samachar
डाक्टरकी श्रीमतीले ८० जना सँग यौ’न सम्बन्ध राखेपछि,उनि दिनको एक जनासँग शरिरिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छिन (भिडियो हेर्नुहोस)
सुकुटे बस दु९र्घटनाको मुख्य कारण बाहिरियो कसैले नसोचेको मुटु हल्लने सत्य (भिडियो हेर्नुहोस )
आफै स्कुटर चढेर अस्पताल गएका बुवा डाक्टरको लापरवाहले स्वर्गबास भएपछी अस्पताल परिसरमा हेर्नै नसकिने यस्तो अवस्था थियो
अस्पताल र डाक्टरको लापरबाहिले बुवा लाई खाए पछी छोरीहरु भन्छन डाक्टर हाम्रो जिम्मा देउ (भिडियो सहित)
हिमानी शाह छठी माताको पूजा गर्न नाग पोखरी पुग्दा यसरि भयो जय जय कार,हिमानीलाई हेर्न हजारौ जनताको ओइरो (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाण्डौको अस्पतालले खायो सामान्य बिरामी,स्वर्गबास भई सकेको मान्छेलाई ४० दिन भेन्टिलेटरमा राखेर ४० लाख खायो (भिडियो हेर्नुहोस )
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/जोतिषीका अनुसार आजका लागि यी ६ राशीलाई हुदै छ महाँफलिफाप भने बाकीलाई ठिकै, पढ्नुहोस असोज २९ गते बुधबारको राशिफल
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। तर अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। हिम्मत गर्दा प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हातपार्न सफल भइनेछ। विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो-बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह-चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो-प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ। व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ। रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो-अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नतिजा सच्याउन केही काम दोहोर्याउनुपरेे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ। बाेलीकाे भरमा काम सम्पादन हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे-प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ। जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले पनि मित्रताका हात अघि बढाउनेछन्। अवसरवादीहरूबाट अलि सजग रहनुहोला। काम पूरा नभए पनि आंशिक लाभ अवश्य हुनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि-विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द-आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। लाभप्रद कामले लोभ्याए पनि फजुल खर्च हुन सक्छ। अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला। देश–विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। छर–छिमेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमलिनुपर्ला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि-नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन हुनेछ। सानाे प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूकाेे उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। पछिका लागि कर्मफल सञ्चय गर्ने समय छ। मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ।
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र २८ गते विहिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
आज आइतबार,आइतबारको दिनमा कालिन्चोक भगवतीको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ फाल्गुन २४ गतेको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#जय_कालिन्चोक_भगवती ।।
आज कुन राशिका लागि शुभ र कुन राशिका लागि अशुभ ॐ लेखी हेर्नुहोस तपाईको आजको भाग्य राशि भेटि स्वरुप सेयर गरौं
तपाईको दिन कस्तो रहला ? पाथिभरा मातालाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् ।